I-LGD4033 powder emfutshane (1165910-22-4) Abavelisi - Phcoker
SKU: 1165910-22-4 Udidi: Sarm Series
I-LGD4033 i powder eyaziwa nangokuthi yiLigandrol / anabolicum, i-modrator receptor modulator (SARM) yokukhetha uphando ukulungiselela unyango lweemeko ezinjenge-muscle ukuchitha kunye ne-osteoporosis.
I-LGD4033 powder ephucukileyo iye yaphuhliswa ukuze isebenzise umlingo wayo we-anabolic kwiisisipha zomzimba. Ngenye yeentlobo ze-SARM ezintsha; ivelisa iziphumo ezifanayo kwi-steroids kodwa ngaphandle kwemiphumo emibi. Ngokuqinisekileyo, yiyona i-SARM enamandla kakhulu kwimarike kwaye ezi ziindaba ezilungileyo ukuba ufuna ukufumana inzuzo enkulu.
I-LGD4033 powder emfutshane (1165910-22-4) Suqobo
Igama lemveliso I-LGD4033 powder
uhlobo Numama Ligandrol
Iqela leziyobisi ummiselo we-androgen receptor (SARM)
Inani leCAS 1165910-22-4
I molecular Fi-ormula C14H12F6N2O
I molecular WSibhozo 338.253 g / mol
IMasaisotopic Mass 338.085 g / mol
Ukuxuba Point 105-107 ° C
Umzimba Ubuncwane bamanzi: 0.00474 mg / mL
yoGcino Tukushisa Gcina kwiqondo lokushisa
I-LGD4033 powder Aukuguquka I-modrator receptor modulator (SARM) yokukhetha uphando malunga neemeko ezinjenge-muscle ukuchitha kunye ne-osteoporosis.
I-Raw Raw ephakamileyo ye-LGD4033 powder (1165910-22-4) Inkcazo
I-LGD4033 idla ngokubizwa ngokuthi yiLigandrol okanye i-LGD kwaye yaveliswa yiLigand Pharma. I-Ligandrol yile yentsapho yee-Modelators ze-Selective Androgen Receptors (SARMs). Ukuqonda ngokupheleleyo i-LGD4033, kufuneka siyazi ukuba yi-SARM. Iyaziwa kakhulu ngenxa yeempawu zayo ezikhulayo ezithintekayo ezinokuthi zingenayo imiphumo echaphazelekayo ye-steroidal. Le nxalenye yento eyenza ithandwa kakhulu ngabadlali bomzimba kunye nabadlali.
I-LGD4033 powder emfutshane (1165910-22-4) Indlela yokusebenza
I-Anabolicum yenza into efana ne-anabolic steroid-based based substance kuba inako ukunyusa ngokukhawuleza ukwakhiwa kwesisundu semisipha ngelixa kunciphisa amaninzi omzimba.
Icandelo leyeza leyeza libhekisela kwi-LGD4033 njenge-SARM okanye "i-modorator ye-receptor ye-receptor." I-LGD4033 iyazibandakanya kwiimitholampilo ze-androgenic ezifunyenwe kwiithambo zethambo kunye nezihlunu, ezivumela ukuba zingabikho ukuxhamla kunye nezicubu zamalungu amakhulu enyama njengentliziyo, i-colon, iprotate kunye neengqungquthela ezixhambileyo.
Ngenxa yoko, le SARM ayifikanga nayiphi na imiphumo emibi edlalwa rhoqo kunye ne-steroids edla ukuxubusha nalezi zimbutho ezinkulu ngokusebenzisa izicubu. Ukuthatha i-LGD4033 kufana kakhulu nebhayisikili kunye noVavanyo-E ngokokuqala ngqa, kwaye oku kwenza ukuba kube yimpumelelo yomzimba. Kwakhona kuyona nto eyokufuphi oyifumana kwi testosterone ngaphandle kokubandezeleka kweziphumo ezimbi.
Kubalulekile ukuba uqaphele apha ukuba uthathe iLigandrol ngexesha lokutya kwekhalori kunye nokujikelezwa kwe-D-bol kunokukhokelela ekugciniwe kwamanzi, kodwa ayikho into ongenakuyenza ngayo. Ngaphezu koko, iziphumo zikhawuleza ukuba zinciphise.
benefits I-LGD4033 powder (1165910-22-4)
◆ Amandla: i-LGD4033 inkulu ngokuphulaphula kwi-plateau. Ngokutsho kwesininzi sabasebenzisi, le SARM inokunyusa amandla enhliziyo kunye nokuphakamisa amandla kwiiveki ezintathu nje.
◆ Ukulahleka kwe-Fat: I-LGD4033 inceda ngokuqhelekileyo ukwakha ubunzima be-muscle ngokulwa nokuphazamiseka kwemisipha endaweni yokugubha ukusetyenziswa kweeseli ezigciniweyo ezigciniweyo. Ngenxa yokuba izicubu ze-muscle zinzima ukugcina kunamafutha, kuyaqondakala ukuba umzimba uqale ukutshisa amafutha ukuze uqhubeke usebenza.
◆ Ukuvakalelwa Okukhulu: Enye yeenzuzo ezinkulu ze-LGD4033 kukuba kukunika amandla kunye nentonongo yonke imini. Ngeke ufanele uhambe ngeendlela eziphezulu kunye nezihlahlo ezinxulumene nezinye iziyobisi, kodwa uya kuziva uhlala unemihlali yonke imini.
◆ Iipompo: Unako ukuhlala unzima, ugciniwe kwaye unamahloni angamafutha xa ujikeleza ne-LGD4033. Ezi ziphumo zifana noko ungakufumana xa ufanele ujikeleze no-Dianabol okanye u-Anavar, ezo zombini ziyaziwa, i-SARM ezinamandla.
I-Raw LGD4033 ephakanyisiweyo (1165910-22-4) Isisombululo
Ubomi besiqingatha se-LGD4033 malunga neeyure ze-30. Ngoko kukhuselekile ukuyithatha kanye ngosuku ngemitha ye-10mg ukuya ku-22mg kwaye usenokufumana iziphumo ezilungileyo kuyo.
Eli qela lisoloko lisetyenziswe kwiSARMs Stack. Uya kubona ukuba idibene ne-GW-50156 kunye ne-MK-2866 ukwenzela ukwandisa iziphumo zakho. Ukuze ufumane uninzi lwe-LGD4033, uyijikeleze kwiiveki ze-8. Qinisekisa ukuthatha ixesha elide ukuze uncede ukugcina amanqanaba akho e-testosterone alungeleleneyo.
Ukuba ufuna isiluleko sam, ndiyahamba neLigandrol umlinganiselo we-5 ukuya kwi-10mg ngosuku. Ubude bomjikelezo kufuneka bube khona ukusuka kwi-6 ukuya kwiiveki ze-10. Yilokho abasebenzisi abaninzi abonakala bahamba nabo.
Imiphumela I-LGD4033 powder (1165910-22-4)
Idatha yophando yangoku kwi-LGD4033 isitsho ukuba i-SARM ayinayo imiphumo emibi echaphazelekayo. Oku kunokwenzeka kakhulu ngenxa yokuba uLigandrol akanalo uhlobo lwe-estrogenic. Njengoko kudla oko akuyi kubangela nayiphi na imicimbi yezempilo efana ne-SARM, njengeentlungu zokulahleka, i-acne, i-bloating, inetyhefu yesibindi, ukugcinwa kwamanzi, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, iingxaki ze-prostate kunye nesifo senhliziyo.
Nangona kunjalo, unesiphumo sokunciphisa iprotate kodwa iyenzeka kuphela xa uyithatha kwizinga eliphezulu kakhulu. Ngaphandle koko, amanqanaba e testosterone kufuneka ahlale eqhelekileyo kuwo onke. Nangona amanqanaba akho e-testosterone ephuma, abuye abuyele kwiiveki eziqhelekileyo ze-3 emva kokuyeka ukuthabatha i-SARM.
Qiniseka ukuba ukhangele ividiyo elandelayo nguRyan Russo. Uya kunika ulwazi oluninzi malunga nale SAR kunye noko ukulindela.